Okwu Mmalite nke ụlọ ọrụ - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Nchịkọta Companylọ Ọrụ
Centerlọ ọrụ mgbasa ozi
Ngosipụta Companylọ Ọrụ
Disposable echebe nkpuchi
Disposable ọgwụ nkpuchi
Ihe nkpuchi FFP3
Ọrụ na Nkwado
Ọrụ Di omimi
Ozi na ntanetị
Asambodo ụlọ ọrụ
Nnukwu ụgwọ ọrụ
Nchịkọta ọrụ na ọzụzụ
- TRlọ ọrụ mmeghe -
Companylọ ọrụ anyị nwere ọpụrụiche na mmepụta nke mkpuchi mkpuchi onwe onye kn95, ihe mkpuchi ahụike, ihe mkpuchi ihu ọha, anyị nwere mmepụta ụlọ anyị nke ahụike
iru eru, anyị agafeela ule ụlọ ụlọ Gb2626-2006, ndị ahịa mba ọzọ en149, en 14683, wdg.
Companylọ ọrụ ahụ na-ejikọ R & D, imewe, ika na ire ere ọnụ iji bụrụ ụwa
ama ama. Site n'echiche nke teknụzụ eriri, anyị na-abanye na ahụike nke ụlọ ọrụ ahụike ma anyị na-enye usoro abụọ nke masks nwere ike iwepụ na ihe nkpuchi kn95 maka ọha mmadụ.
Ndị ọrụ nwere onwe ha Otu R & D
Dị ka anyị niile maara, mmebi gburugburu ebe obibi ebutela mmetọ ikuku na mbibi nje. Kwa afọ, ihe karịrị nde mmadụ iri abụọ na-anwụ site na ọrịa iku ume na ọrịa nje na gburugburu ụwa.Mask abụrụla ngwaahịa dị mkpa na ndụ anyị. N'ime ọrịa a zuru ụwa ọnụ, nkpuchi arụkwala ọrụ dị mkpa na usoro mgbochi Ọrịa.
Akwa arụmọrụ, elu mma na highprice tụnyere price ntụnyere
Eme nkwa ngwaahịa mma na ọrụ
N'afọ 2020, ụlọ ọrụ ahụ bidoro imepe ụlọ ọrụ nkpuchi n'isi gị n'oge ntiwapụ nke ọrịa. N'okpuru ọnọdụ siri ike, ụlọ ọrụ ahụ bilitere ngwa ngwa. Ugbu a, etinyela ihe mkpuchi ankanfuseries n'ahịa n'ọtụtụ buru ibu, na-enye ngwaahịa ndị magburu onwe ha maka ọha na eze iji guzogide epi-demic ma chebe ahụike.
- NGosi ụlọ ọrụ -
Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd. emi odude ke E6 factory iwu-ing, ulo oru sayensị na Technology Park, Xixiu District, Liangliu Road, Xixiu District, Anshun City, Guizhou Province, ekpuchi ebe 3200 m², na 409 m² mmepụta nkwakọba, anyị nwere 2000 m² omumuihe na 420 m² office na ebe obibi.
Anyị ụlọ ọrụ bụ a ụlọ ọrụ tụnyere R & D, imewe, mmepụta andselling. Anyị kpebiri iji nye ndị ahịa anyị ọrụ kacha mma.
Otu Shun AKF Medical Technology Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ ọhụụ na ngalaba nke nkpuchi, Site na nhọpụta na ịzụta ihe maka ntinye aka nke nkwakọ ngwaahịa, na nhọpụta nke igwe, wdg, anyị ga-ekpebi kacha mma na ụlọ ọrụ a .
Anyị ga-agba mbọ hụ na nkpuchi ọ bụla anyị mepụtara bụ nke kachasị mma na ájá. Mee ka onye ọrụ ọ bụla nke nkpuchi AKF nweta nchedo kachasị mma.
- Maapụ azụmahịa -
Ka ọ dị ugbu a, achọtala ngwaahịa mkpuchi nke Runbo n'ọtụtụ
mba na mpaghara gburugburu ụwa ,, gụnyere Europe, na
United States, Germany, United Kingdom, Australia, Russia, HongKong, wdg. Companylọ ọrụ anyị emeela nnukwu ọrụ n'oge oge ọrịa, Anyị na-atụ anya na mụ na ndị ọkachamara ga -
Osisi E6, Ind. Tech Park, Xixiu Mpaghara, Liangliu Road, Xixiu Dist., Anshun, Guizhou, China
Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap